'सेटीङ' भत्किएपछी निर्देशिकालाई दोष ! एफपीओ ल्याउने शिखरको सपना हुरीले उडाएपछी अव एक मात्र विकल्प 'बोनस' !
ARCHIVE, COVER STORY, POWER NEWS » 'सेटीङ' भत्किएपछी निर्देशिकालाई दोष ! एफपीओ ल्याउने शिखरको सपना हुरीले उडाएपछी अव एक मात्र विकल्प 'बोनस' !
काठमाडौँ - शिखर इन्सुरेन्सले सम्बन्धित निकायमा मिलाएको 'सेटीङ' भत्किंदा नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारि गरेको धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ लाइ दोष दिएर शिखरको एफपीओ माथि रोक लगाइएको छ । यसअघि यो निर्देशिकाका बाबजुतपनि एफपीओ ल्याउन शिखरले तयारी गर्दै सम्बन्धित निकायहरुमा 'सेटीङ' मिलाएको थियो । नयाँ निर्देशिका अनुसार शिखरलाई एफपीओ जारी गर्न अनुमति नदिइएको बोर्डका प्रबक्ताको भनाइ छ ।
चुक्ता पुंजी १ अर्ब पुर्याउन शिखरले गत फागुनमा एफपीओ निष्काशनको अनुमतिका लागि आबेदन दिएको थियो । अव बिनास सेयर बितरण मार्फत २०७५ असार मसान्तसम्म १ अर्बपुर्याउने बाहेक शिखरसँग केहि विकल्प छैन । हाल शिखर इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुंजी ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने जगेडा कोषमा २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।